प्रजु पन्त आइतबार, असार २१, २०७७, १०:१२
काठमाडौं-गत बुधबार बानेश्वरको संसद भवनअगाडिदेखि यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयसम्म लस्करै थिए दर्जनौँ ट्याक्सी। सडक किनारामा छरिएर बसेका थिए ट्याक्सी चालक। कोही फुटपाथमा, कोही ट्याक्सीभित्रै त कोही रुखको छेल पारेर गफ गरिरहेका। असार १६ यता यही दैनिकी थियाे ट्याक्सी व्यवसायीहरूकाे।
आफ्ना मागसहित उनीहरु ट्याक्सीसहित नै धर्ना दिएका थिए।
सरकारलाई उनीहरुको आग्रह थियो‚ 'अब त भोकले मरिने भइयो। सरकारले बनाउने नियम मान्छौं तर ट्याक्सी चलाउन देऊ।' निजी सवारीसाधन चलाउन दिने तर ट्याक्सीलाई नदिने सरकारी नीतिमाथि उनीहरुको प्रश्न थियो, 'रातो नम्बर प्लेटको सवारीमा कोरोना नसर्ने, कालो प्लेटमा मात्र सर्ने यो कस्तो रोग हो सरकार?’
ट्याक्सी व्यवसायीले तीन महिनाको ब्याज तथा घरभाडा छुट हुनुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए। बिहीबार पनि उनीहरुको आन्दोलन चल्यो। तर शुक्रबारबाट एकाएक रोकियो। उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष सानु पुर्वाछेका अनुसार उनीहरुको आन्दोलनमा पनि घुसपैठ भयो। आन्दोलनमै चालकबीच विवाद हुन थालेपछि धर्ना नै स्थगित गर्नुपर्‍याे।
‘ट्याक्सी व्यवसायको हित नचाहनेहरुको घुसपैठ भयो। हाम्रो माग यथास्थानमा छ, धर्ना स्थगितमात्र गरेका हौं,’ उनले भने‚ 'हामीले बुझाएको करले मन्त्री-कर्मचारी लाखौँको गाडी चढ्ने, अहिले हामी भोकै पर्दा सरकारले वास्तै नगर्ने। ऐन‚ नियम‚ कानुन‚ भोक सबैको एकै हैन र?’
पुर्वाछेका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १२ हजार ३ सय ८५ ट्याक्सी छन्। काठमाडौँमा आफ्नै ट्याक्सी भएका चालकको पनि ठूलो संख्या छ। घरभाडा बुझाउन नसकेर, घर खर्च नभएर, किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकबाट फोन आएर हैरान भएका ट्याक्सी चालकहरु थुप्रै भेटिए। तीमध्येकै एक हुन् सोम मगर। उनले यसरी आफ्नो व्यथा पोखे:
के रातो नम्बर प्लेटलाई कोरोना लाग्दैन?
मेरो घर धनुषा ढल्केबर हो। खेतीकिसानीबाट खानै नपुग्ने। ४ जना दाजुभाइ थियौं। पढ्न सक्ने घरको आर्थिक अवस्था थिएन। धन्न एसएलसीसम्म पास गरें। त्यसभन्दा माथि पढ्नेभन्दा पनि घर खर्च धान्न काम गर्नुपर्ने भयो। गाडी सिकें। १० वर्षअघि काठमाडौं आए र हातमा सीप भएकाले काम पाइहालें। सात वर्ष साहुको ट्याक्सी चलाएँ। छोड्दासम्म दिनको हजारदेखि १५ सयसम्म तिर्नुपर्दथ्यो। व्यवहार ठिकै चलिरहेको थियो। एक दिन साहुले नमिठो वचन लगाएपछि मन चसक्क भयो। किस्तामै भए पनि आफ्नै गाडी किन्छु भनेर २६ लाखमा गाडी किनेँ।
२ वर्ष भयो गाडी किनेको। महिनाको ३५ हजार तिर्दै आएको थिएँ। तर यो तीन महिना त बिजोगै भयो। घरमा पहिले जोगाएको पैसा सकिएर साथीभाइसँग २५ हजार ऋण मागेर खर्च चलाएको छु। छोराको कलेजले १६ हजार फिस माग्यो। त्यो बुझाउन सकेको छैन। घरबेटीको भाडा ८ हजार छ, अझ बैंकले पैसा बुझाउनु भनेर ताकेता गरेर हैरान छ। गाडी घरमा थन्कियो, पेट भोकै भो। बैंकमा ऋण छ तर सरकारले हामीलाई केही नै वास्ता गरेको छैन।
असार १ गतेबाट लकडाउन हल्का भएपछि बाहिर निस्किएको त राता नम्बर प्लेटका गाडी कुदिरहेका। के रातो नम्बर प्लेटलाई कोरोना लाग्दैन? कालो नम्बर प्लेटले कोरोना बोक्छ? सरकार गरिखाने वर्गको होइन? किन भेदभाव गरेको हो हामीलाई? हामीलाई पनि मापदण्ड तोकिदेओस्। ट्याक्सी चलाउन दिनुपर्‍यो।
घरमा चामल सकिसक्यो राहत केही पाएका छैनौं। बैंकको ऋणभन्दा पनि भोकको त्रास भयो। नेपाली उखान छ नि ‘दिन नलागोस् ऋण लागोस्’ तर हामीलाई यहाँ उल्टो भएको छ। हामीलाई दिन लागेको छ सरकारले गरिखाने वर्गलाई ऐन‚ नियम‚ कानुन पहुँच हुनेलाई नलाग्ने हामीलाई मात्र लाग्ने हो?
सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ गरोस्। हामी तोडफोड गर्न आएका होइनौं। ट्याक्सी देखाएर रमिता देखाउन पनि आएका होइनौं हामी भोकाएर आएका हौं सरकाले यति बुझोस्।